Usayizi 215 MB
Play 77 867
Umbhali: Ukuphindaphindwa abalobi, repack ngu Ricardo_tv, okuthuthukiswa Rikoooo
Rikoooo presents ngoxhaxha nkampani yezindiza LTU (Lufttransport-Unternehmen ngoba "umoya zokuhamba ibhizinisi") lapho e 2009 ihlanganiswe ne Air Berlin. Lokhu pack is a nomagazini okhethekile kumemori sasiyingxenye inkampani 1955 kuya 2009.
Thola bese fly 10 izindiza mlando eziye sakhiwa LTU yemikhumbi kusukela 1955, kusukela Lockheed L-1011 Tristar at Airbus A320 ngokusebenzisa Bae 146-200, zonke lezi izindiza ngeke kokhela iphupho isikhathi esidlule esikhazimulayo. izindiza ngasinye banikela kule pack ifakwe izinga functional abanikeze asebenza nabo virtual 2d panel. Futhi samanje, inkambiso umsindo ngemodeli ngayinye esekelwe izinjini.
Lokhu pack ihlolwe futhi evunyiwe yama-FSX-SP2 futhi Ukusheshisa & Prepar3D v1, kuba mhlawumbe iyahambisana version 2 of Prepar3D kanye izinguqulo nezinye of FSX, wenze nezivivinyo yakho.
Ngenxa abalobi abahlukahlukene freeware kufakwe kule iphakethe ngomsebenzi wabo okusika.
Uhlu indiza photo yangaphandle futhi ingaphakathi:
LTU International Airways Fleet FSX & P3D Thwebula
Incazelo 735 852
Incazelo 95 204
Incazelo 287 857
Incazelo 46 643
Incazelo 22 822
Incazelo 54 711
Incazelo 420 238
Incazelo 20 080